सहकारीले सदस्यलाई चाहिए जति लगानी गर्न सकेनन् | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
ओमदेवि मल्ल- नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बा मानिँदैै आएको छ । अर्थतन्त्रको खम्बा बलियो हुनका लागि सबै खम्बा उत्तिकै बलियो हुनु जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रको एक खम्बा सहकारीलाई पनि बलियो बनाउनका लागि अहिले सहकारी मर्ज गर्नुपर्ने विषय चर्चामा छ । हाल देशमा झण्डै ३५ हजारको सङ्ख्या नजिक सहकारी संस्थाहरु छन् । तर यिनीहरुको जीडीपीमा योगदान पाँच प्रतिशत रहेको भनिदै आएको छ । यद्यपि यसबारे अध्ययन भएको ठोस आँकडा भने छैन ।
नेपालभन्दा ठूला देशमा एक हजारभन्दा कमको सङ्ख्यामा सहकारी छन् । जापान, कोरिया लगायतका देशमा पनि एक हजारभन्दा कम सहकारी छन् । जब कि केही वर्षअघिसम्म त्यहाँ १३ हजारको हाराहारीमा सहकारी थिए । त्यहाँ सहकारी कम हुँदा झन् बलिया भएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी कोरियामा निकै बलिया छन् भने जापानमा कृषिको सहकारी निकै बलिया छन् । उनीहरु मर्जमा गएपछि बलिया भएका हुन् जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन् ।
यसकारण पनि सहकारी ऐनले एउटा जिल्लामा एउटा विषयगत सङ्घमा एउटा मात्रै सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले सदस्य दोहोरिने क्रम घटेर जान्छ । यसले कति संस्थाहरु विचलित हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसैले सहकारीमा मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो । बरु कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहमा सहकारी पुगेको छैन भने त्यहाँ सहकारी खोलौँ तर बढी भएका ठाउँमा एक अर्कामा गाभाँै।
कुनै सदस्यलाई व्यवसाय गर्न एक करोड रुपैयाँ ऋण चाहिएको छ भने अहिले एउटै सदस्यलाई त्यति लगानी गर्न सक्ने हैसियतका छैनन् सहकारी । विभिन्न संस्थाहरु गाभिएपछि यो हैसियत बन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका सदस्यहरुले आफूलाई एक करोड ऋण चाहिएको तर सहकारीको १० लाखभन्दा बढी दिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । यसले सहकारी आन्दोलन अर्थतन्त्रको एक खम्बा सावित हुन सक्दैन । अर्बौंको पुँजी भएको बैङ्कहरु त मर्जमा गएका छन् भने लाख लाख पुँजी भएको सहकारी किन मर्जमा नजाने ? आजको अवस्थामा ५, १० करोडको सहकारी चलाएर बस्न गाह्रो छ । आफू सदस्य भएको संस्थाबाट कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहने सदस्यका लागि ऋण सहज पाउने अवस्था बन्नुपर्छ ।
समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि सहकारीको मर्ज आवश्यकता छ । चाइना उद्योगका लागि कम्पनी जस्तो स्थापना गरेर अगाडि बढेको छ भने जापान, कोरिया पनि त्यसैगरी अगाडि बढेका छन् । जुन देशका सहकारीमा सरकारी हस्तक्षेप नभई सहजीकरण भएर अगाडि बढेको छ, त्यस देशमा सहकारी निकै राम्रोसँग फस्टाएको छ । फिलिपिन्समा विस्तारै विस्तारै सरकारी हस्तक्षेप हुन थाल्यो । त्यहाँ सहकारी नै सकिएर गए । इरानमा पहिला सहकारी थिएन । अहिले त्यहाँको सरकारले सहकारीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ । युरोपको सहकारीलाई ईयूले सहयोग गरिरहेका छन् । सहकारी क्षेत्र मजबुत बनाउन सरकारी सहयोग र सहजीकरण पनि जरुरी छ । मल्ल राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी उपाध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी ग्लोबल सदस्य हुन्